Maitiro ekuchinjira kune yeFaceTime kufona kubva kufona | IPhone nhau
Maitiro ekuchinjira kune yeFaceTime kufona kubva kufona
Mazhinji efoni atinoita zuva nezuva, kana tisingangoshandisa mameseji ekunyorera, kazhinji anenge akapfupika, asi dzimwe nguva chero chikonzero chingave chakareba kupfuura iyo account, kunyanya kana tichifanira kutsanangura chimwe chinhu tichiona kana isu tinofanirwa kuratidza matanho ekutevera zvinoonekwa, nekuti kuburikidza nemirairo yedu yemuromo hapana nzira yekuti vatinzwisise.
Munguva idzodzo, tinowanzofunga kusungirira foni yatiri kuita uye kuita vhidhiyo yekufona kuburikidza neFaceTime. Neraki, hazvidi kuti urembedze iyo nhare kuti utange kutsanangudza zvakare asi isu tinokwanisa kuchinjisa nharembozha kune yeFaceTime kufona pasina kurembera.
Pakutanga isu tinofanirwa kuve neFaceTime kufona inogoneswa pane yedu kifaa, zvikasadaro sarudzo yekuita FaceTime kufona haizoonekwe iripo panguva yekufona. Kuti tiite izvi tinofanirwa kuenda kumamiriro e iPhone yedu uye tinya paFaceTime kuti utarise mukati memenu iyo iyo FaceTime tebhu inogoneswa
Chechipiri, isu tinofanirwa kufunga kuti kana iyo vhidhiyo kufona naFaceTime inotanga isu tichafanirwa kushandisa iyo data Yedu chiyero, kunze kwekunge isu tine Wi-Fi network inowanikwa munzvimbo yedu.
Shandisa iyo FaceTime kufona kubva parunhare
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kufona uye mirira anopindirana kuti apindure.
Paunenge uchinge wapindura iyo kufona, isu tinotsvaga iyo iPhone skrini iyo icon inomiririra vhidhiyo kufona pane iyo iPhone uye isu tichava tinya pazviri.
Masekonzi mashoma gare gare vhidhiyo yekufona ichagadziriswa pakati pemapato akafanana. Kana isu tiri pasi pekubatana kweWi-Fi shanduko inozoita ipfupi pane kana tikashandisa yedu yakajairwa dhata yekubatanidza
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuchinjira kune yeFaceTime kufona kubva kufona
Vanyoreri veApple Music vanotaura nyaya dzebasa
Apple haina kupedza nguva uye zvakare inotangisa iOS 9.3 beta 1.1